पहिचान र 'ब्युटी शेमिङ’- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार ३, २०७६ साङमो योन्जन तामाङ
केही समयअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीको भिडियो क्लिपले सामाजिक सञ्जाल बेस्कन तताइरहँदा मेरो ध्यान भने त्यही अडिसनकी अर्की प्रतियोगीतिर खिचियो । किशोरावस्थादेखि आफ्नै रूप मन नपराउँदै आएकी उनी साथीसंगीसरह सुन्दर नदेखिएकामा निकै निराश रहिछन् ।
अनुहारको बनोट (ठूलो नाक र गालाको हाड) विज्ञापन र फिल्ममा देखाइएका युवतीहरूको जस्तो नभएकामा हीनताबोध गरिरहेकी उनले आफूजस्तै देखिने युवतीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सो प्रतियोगितामा विजेता बनी आत्मविश्वास बढाउन चाहेको रहस्य खुलाइन् । आफ्नो सोचमाथि फरक शैलीमा प्रस्तुत भएको निर्णायक मण्डललाई उनले समग्र नेपाली मिडियामा आफ्नो जस्तो अनुहारले कति स्थान पाएको छ त भन्दै जवाफमार्फत नै झापड हानिन् ।
अन्यत्र झैं नेपाली समाजमा पनि महिलाको बाह्य सुन्दरतालाई विशेष स्थान दिइन्छ । केही समुदायले छुट्टै सुन्दरताको मानक (ब्युटी
स्ट्यान्डर्ड) बनाएका छन् । त्यसै बमोजिम जब कुनै महिला, विशेष गरी युवतीलाई, अयोग्य ठहर्‍याइन्छ, यसको मुख्य असर तिनको सांस्कृतिक–सामाजिक व्यवहारमा पर्ने गर्छ ।
नमिलेको ठानिएको अनुहारप्रति तिनले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने गरेकी हुन्छिन् भने कतिपय अवस्थामा तिनलाई लज्जाबोध पनि हुन्छ । तिनले रूपकै आधारमा होच्याउने व्यवहारको सामना गरिरहनुपरेको हुन्छ । यसरी उनी ‘ब्युटी शेमिङ’ को सिकार हुन्छिन् । बाहिरी शारीरिक आवरण (फिजिकल अपिरियन्स) लाई सुन्दरतासंँग जोडेर गिज्याउनु वा अपहेलना गर्नु नै ‘ब्युटी शेमिङ’ हो ।
समाज, सुन्दरता र 'ब्युटी शेमिङ’
‘तिम्रा आँखाले कतिसम्म देख्छन् ? हामीसरह नै देख्न सक्छन् ?’ तथाकथित मूलधारको सौन्दर्य मापदण्डमा नपरेका ती समुदायका युवतीले एक न एक पटक यस्तो प्रश्नको सामना गरेकै हुन्छन् । अज्ञानताले नभई मजाककै रूपमा यसरी उनीहरूको प्राकृतिक रूपमा हाँसो गरिन्छ ।
काला वर्णका महिलाहरूलाई सुन्दरीको कोटिमा राख्न त्यो समाज अनकनाएको देखिन्छ, वजन र उचाइकै आधारमा गरिने अनेक टीकाटिप्पणी खपिनसक्नु हुन्छन् । अझ विभिन्न आपत्तिजनक विशेषणयुक्त सम्बोधनले उनीहरूलाई लाजमर्दो बनाइदिन्छन् । यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु ‘ब्युटी शेमिङ’ गर्नु हो । यस्तो हाँसोको सिकार मूलतः टिबेटो बर्मन आकृति (मूलधार बाहिर) भएका युवतीहरू हुने गरेका छन् । बाहिरी आवरणकै आधारमा कसैलाई अपमानित गर्नु र क्षमतामाथि प्रश्न गर्नु पनि विभेद हो ।
‘तिम्रा कोही सन्तानचाहिँ कस्तो सर्लक्क परेका छन् है ! हामीजस्तै देखिन्छन् ।’ बेलाबखत मेरी आमालाई समाजका केही सदस्यबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउने गर्छ, जसले आमालाई यो प्रशंसा हो वा अपमान ठम्याउनै नसक्ने गरी अक्क न बक्क बनाइदिने गरेको छ । ‘युरो सेन्ट्रिक फिचर’ भएका गोरा जातिलाई जसरी शताब्दियौंदेखि सुन्दरताको परिभाषामा पारियो, त्यस्तै स्थिति नेपालमा पनि विकास भइरहेको छ ।
प्रत्येक समुदायमा सौन्दर्य मापनको आआफ्नै प्रचलन हुन्छ, सुन्दर–असुन्दर अनुहारको परिभाषा पनि हुन्छ । तर, हामीकहाँ इतर समुदायबाट सुन्दरताको यस्तो मानक बनाइयो, परिभाषा नै उल्टियो । इन्डोआर्यन आकृति नै ठीक भन्ने मानसिकता विकसित गराइयो । यसले गर्दा आफ्नै रूपप्रति हीनताबोधसंँगै आत्मविश्वासमा कमी जस्ता मनोवैज्ञानिक असर त छँदै छन्, आफ्नो संस्कृति, समुदाय र पहिचानप्रति नै वितृष्णा जागेका युवा पुस्ताको जमात पनि बढेको बढ्यै छ । असमानता र असमावेशी राज्य व्यवस्थाले तिनको सुन्दरतालाई अस्वीकार गरेको नतिजा हो यो ।
कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायमा सामाजिकीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामाजिक परिवेश र त्यसमा हुने अन्तरक्रियाले उनीहरूमा ठूलै प्रभाव पारेको हुन्छ । सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा जसरी पितृसत्तात्मक सोच, व्यवहार र जरैसम्म गाडिएको लैंगिक मूल्य–मान्यताले महिलालाई विभेदमा पार्‍यो, त्यसरी नै नेपाली समाजमा नारीको सौन्दर्यको मानकले विभेद स्थापित गर्‍यो । नेपाली समाजले निश्चित अनुहारलाई ‘ब्युटी आइडल’ मान्ने गरेको छ, जसमा विविध वर्ण, आकार, जाति, समुदायका महिलालाई समावेश गरिएको छैन ।
मैले माथि उल्लेख गरेका महिलाहरू तिनै मूलधारका सुन्दरीको जमातमा नअटाएका नयाँ पुस्ता हुन्, जसको सामाजिकीकरण यसरी नै भयो र भइरहेको छ । उनीहरूले बाल्यकालदेखि नै आफू वरिपरिको वातावरणमा आफ्नो मौलिक (प्राकृतिक) रूपलाई सुन्दरताको संज्ञा दिएको कहिल्यै पाएनन् ।
यसले उनीहरूको मस्तिष्कमा नकारात्मक छाप पार्‍यो, आफू जन्मिएको समुदायप्रति घृणासमेत जगायो । मिडियाले महिलालाई कमजोर, सहनशील, घरको काममा मात्र सीमित देखाएजसरी नै सौन्दर्यलाई लिएर पनि सधैं एउटै खालको ‘ब्युटी पर्फेक्सनिस्ट’ देखाउँदै आएको छ । यसको असर तिनै महिलामा पर्ने गर्छ, जो त्यस्तै कुरा हेर्दैै हुर्किन्छन् ।
समाजको यस्तो दबाब झेल्न नसकेपछि ती युवतीहरू सम्भवै नहुने ‘ब्युटी स्ट्यान्डर्ड’ मा अटाउन प्रयासरत हुन्छन् । ‘ब्युटी शेमिङ’ बाट बच्न उनीहरू जानी–नजानी आफ्नो अनुहारको प्राकृतिक स्वरूप नै परिवर्तन गरी कृत्रिमतामा रमाउन खोजिरहेका हुन्छन् । ठूला आँखा, बाक्ला परेला, सीधा नाक, ‘डिभाइन्ड चिकबोन’ र गोरो वर्ण बनाउन उनीहरू सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोगमा लालायित देखिन्छन् । समाजले सबै खाले सौन्दर्यलाई समान व्यवहार नगर्नुको परिणाम हो यो ।
पश्चिमा समाजमा, विशेष गरी अफ्रिकी समाजमा व्यापक रूपमा ‘ब्युटी शेमिङ’ हुने गरेको छ । कालो छाला, ठूला आठ, घुम्रेको ‘ड्रेडलग’ कपालका कारण उनीहरूमा विभेदित मानसिकता भएको पाइन्छ । अमेरिकामा काला जातिको कपालप्रतिको विभेद अमेरिकाजति नै पुरानो छ । रङ्गभेदको उन्मूलनपश्चात् पनि सीधा कपाल सामाजिक र पेसागत अवसरहरूका लागि अपरिहार्यप्रायः रहिआएको छ । अहिले पनि कतिपय कार्यालयमा काला महिलाले कपाल सीधा बनाउनुपर्ने वा नक्कली कपाल (विग) लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
ओस्कार विजेता अभिनेत्री, केन्याली मेक्सिकन मूलकी लुपिता नियोङ्गोले आफ्नो त्यस्तो भोगाइबारे खुलेर बताउने गरेकी छन् । एउटा म्यागजिनको आवरणमा आफ्नो कपाललाई फोटोग्राफरले भिन्न बनाइदिएकामा उनले आपत्ति जनाइन् । केही ढिलै भए पनि ती फोटोग्राफरले लुपितासँग माफी मागे ।
काला जातिका महिलाले शृङ्गार गरी अनुहारको स्वरूप बदलेर दमनलाई ‘इन्टर्नलाइज’ गरेको र गोरो नारीवादलाई आदर्श मानेको काला अभियन्ताहरू तर्क गर्छन् । ‘युरोसेन्ट्रिक ब्युटी’ बाट उन्मुक्ति पाउन नसकेको पनि उनीहरू बताउने गर्छन् ।
अहिले सुन्दरताको अवधारणामाथि विभिन्न खाले विमर्श चलिरहेका छन् । यसले निम्त्याएको विभेदको आलोचना गर्दैगर्दा ‘सबै मानिस सुन्दर हुन्छन्’ (एभ्री पर्सन इज ब्युटिफुल) भन्ने धारणा जनमानसमा राम्रोसँंग पुगिनसकेकाले उक्त भनाइ नै गलत भएको टिप्पणी पनि सुरु भएको छ ।
विभेद र दमनको लामो इतिहास बोकेको समाजमा यस्ता सवालले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्छन् । नेपाली समाज सुन्दरताको सवालमा विभेदपूर्ण नै छ । पुँजीवादी व्यवस्था, वर्चस्वधारी र व्यापारिक शक्तिहरूले सुन्दरताको सही प्रतिनिधित्व गरेनन् । दशकौंदेखि तिनले आफू अनुकूल सुन्दरता मात्र प्रस्तुत गरे, सुन्दरताको वस्तुकरण र बजारीकरण गरे ।
हाम्रो देशमा ठूलठूला राजनीतिक–सांस्कृतिक परिवर्तनसंँगै महिला आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दासमेत ‘ब्युटी शेमिङ’ को उठान नहुनु, या भनौं पहिचानै हुन नसक्नु, दुःखद हो । अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा समावेशिताको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै विविधताभित्रै सुन्दरतालाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको विभेदपूर्ण दमित–शोषित ‘ब्युटी स्ट्यान्डर्ड’ ले विविधतालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, त्यो जुनसुकै आकार, बनोट, वर्ण, जाति वा समुदायको किन नहोस् ।
मानसिकता परिवर्तन सहज त हुन्न, तर शान्तिपूर्ण वा द्वन्द्वरहित समाज निर्माणका लागि यो आवश्यक छ । महिलाको सुन्दरताको विविधतालाई सही तरिकाले प्रस्तुत गर्न चुकेका मिडियाले सबै प्रकारको सुन्दरतालाई अङ्कमाल गरी सम्मान गर्नुपर्छ ।
sangmo.yt@gmail.com प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५१